Wasiir Dhuxulow “Dhalinyarada Soomaaliyeed shaki iigama jiro inay noqonayaan cayaartooyda ugu muhiimsan caalamka.” – Radio Muqdisho
Wasiir Dhuxulow “Dhalinyarada Soomaaliyeed shaki iigama jiro inay noqonayaan cayaartooyda ugu muhiimsan caalamka.”
Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa xalay ka qeybgalay tartan kubadda cagta oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid Yurub ay kula cayaarayeen cayaartoyda kooxda Dubai City. Wasiirka ayaa yiri “Dhalinyarada Soomaaliyeed shaki iigama jiro inay noqonayaan cayaartoyda ugu muhiimsan caalamka.”
Wasiirka oo la hadlayey dhalinyarada ayaa yiri “Aad baan ugu faraxsanahay inaan idiin imaado, waxaadna na tusteen inaad tihiin dhalinyaro dishibiliin leh oo muujiyey cayaar aad loola dhacay, waxaana idinku dhiiri gelinayaa inaad sii wadaan dadaalkiina oo aad waddankiina hooyo ee Soomaaliya aad matashaan. Shakina iigama jiro inaad noqoneysaa dhalinyaro ku soo caan baxa Isboortiga gaar ahaan kubadda cagta.”
Real Madrid oo Ka Badisay Almeria,Rikoor Cusubna Dhigtay “Sawirro”
Shariif Xasan “Waddooyinka Bakool dhawaan waa la furayaa”
Shariif Xasan "Waddooyinka Bakool dhawaan waa la furayaa"